चोला फेर्ने चुनौती
पुरानो बदनाम टोल गगनगन्जको नाम प्रगतिशील मार्गका रूपमा फेरिएको छ ।
२० पुस २०७१ आइतबार
पुरानो बदनाम टोल गगनगन्जको नाम प्रगतिशील मार्गका रूपमा फेरिएको छ । कुनै बेला देहव्यापारमा संलग्न वादी समुदायका पुराना चालचलन, व्यवहार, खानपिन र जीवनशैलीमा पनि निकै परिवर्तन देखिएको छ । तर, स्थायी बसोवास र रोजगारको अभावमा दैनिक जीवन भने उत्तिकै कष्टसाध्य छ ।
उसो त वादी समुदाय शिक्षासँगै आत्मसम्मानका साथ जीवनयापन गर्न समूह बनाएर आयआर्जन तथा वित्तीय कारोबारमा पनि संलग्न छ । "समूहको सदस्यबाट पहिले महिनामा १० रुपियाँ उठाउँथ्यौँ । अहिले ५० रुपियाँ बचत गर्छौं । खातामा डेढ लाख रुपियाँ जम्मा भएको छ," नवनिर्माण महिला विकास बहुउद्देश्यीय संस्था, कचनापुरकी अध्यक्ष जमुनी वादी भन्छिन्, "पहिले आफ्नै नाम भन्न सक्दिनँ थिएँ । अहिले ५० जना महिलाको नेतृत्व गर्न सक्ने भएकी छु ।"
शान्ति महिला विकास बहुउद्देश्यीय संस्था, नेपालगन्जकी उपाध्यक्ष मञ्जु नेपाली घरबास र रोजगारविहीन भए पनि सम्मानित जीवन बिताएकामा गर्व गर्छिन् । भन्छिन्, "अहिले समुदायले शिक्षामा जोड दिएको छ । सरकारले उच्चशिक्षा हासिल गर्न चाहने युवक-युवतीलाई निःशुल्क पढने व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो ।"
उच्चाटलाग्दो विगतबाट मुक्त भएको उक्त समुदायको नेतृत्व गर्ने तयारीमा लागेकी छन्, एकता नेपाली, २७ । प्लस टु सकेर रोजगार खोज्दै आएकी एकता एउटा कुरीतिबाट मुक्त भए पनि सरकारी र सामाजिक उपेक्षाको भुमरीबाट बाहिर निस्किन कठिन भइरहेको बताउँछिन् । भन्छिन्, "देहव्यापारको दलदलबाट समाज मुक्त भयो । तर, गरिबी र अभावको आगोमा धेरैका अपेक्षा जलिरहेका छन् ।" प्रगतिशील मार्गमा बस्दै आएका ४५ वादी परिवारमध्ये धेरैका घर छैनन् ।
कसैले लस्करै कोठा भएका घरभाडा लिएर बस्दै आएका छन् । त्यहाँ कसको कोठा कुन हो भन्ने रंगले पहिचान हुन्छ । ढोकाअगाडि कसैले रातो, सेतो त कसैले हरियो र नीलो रंग लगाएका छन् ।
उपमहानगरपालिकाभित्रको बस्तीमा एउटा सार्वजनिक धारा र शौचालय मात्र छ । कहाँ खाने ? कहाँ सुत्ने ? नित्य कर्म कहाँ गर्ने ? सबै अस्तव्यस्त देखिन्छ । त्यसमाथि पनि फोहर र दुर्गन्धको व्यवस्थापन छैन । "आफैँ बस्न गाह्रो छ । पाहुना आउने भए भने पनि नआऊ भन्नुपर्छ," मुना आफ्नो बस्तीको विवशता सुनाउँछिन् ।
सरकारले पिछडिएको वादी जातिका लागि घरबास दिने नीति नल्याएको पनि होइन । तर, आफ्ना नाममा जग्गा नभएकाहरूले सरकारी सुविधा नपाउने हुँदा बिचल्लीमा परेका भूमिहीनका लागि नीति आकाशको फल हुन पुगेको छ । डिभिजन कार्यालयमा दुई वर्षदेखि घरबासको माग लिएर वादी समुदायको ओइरो लाग्दै छ । तर, 'जनता आवास कार्यक्रम' अन्तर्गत बाँके र बर्दियामा घर बनाइदिने जिम्मेवारी पाएको डिभिजन कार्यालय पन्छिएको छ । "धेरैजसोको आफ्नो जग्गा छैन । उनीहरू जंगल क्षेत्रमा छन् । आफ्नो जग्गा नहुने र जंगलमा बस्नेलाई घर नदिने नीति हुँदा दुई वर्षदेखि सरकारी कार्यक्रम लागू गर्न सकिएको छैन," इन्जिनियर होमनाथ भुसाल भन्छन् ।
०६५ सालमा सरकारले उक्त नीति ल्याएको थियो । वादी समुदाय बसोवास गर्दै आएका १० जिल्लामा त्यस बेला तीन करोड रुपियाँ आवास निर्माणका लागि छुट्टयायो । तर, नीति परिवर्तन नगरिँदा जग्गा नहुने बाँकेको अगैयामा बसेका दर्जनौँ भूमिहीन परिवार उक्त सुविधाबाट वञ्चित छ । यस्तो अव्यावहारिक नीति परिवर्तन गरिनुपर्ने माग भूमिहीन तथा पिछडिएका जातिले गर्दै आएका छन् ।
महँगो र भड्किलो सहरको जीवनशैलीका बीचमा हुर्केर शैक्षिक प्रमाणपत्र हासिल गर्नेहरूले समेत रोजगारी पाएका छैनन् । ०६६ सालमा सीएमए सकेका पुरन नेपाली -वादी)ले राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि सिंहदरबारका धेरै सरकारी निकायमा पुगेर योग्यता र क्षमता अनुरूपको रोजगार दिन हारगुहार गरे । सरकारी अधिकारीले पिछडिएका जातिलाई प्राथमिकता दिने आश्वासन मात्र दिए । भन्छन्, "नाम पनि निस्क्यो । छनोट गर्दा मैले जागिर पाइनँ ।"
आप\_\_mनो वर्गको समस्या समाधानका गर्न संघर्ष र अवाज उठाइदिने व्यक्ति आफैँभित्रको हुन आवश्यक रहेको बुझेका छन् सबैले । सुब्नी क्षेत्री नेपाली स्नातक तहमा अध्ययनरत छिन् । कविता नेपाली अनमि पढ्दै छिन् । वसन्ती नेपाली सीआरएस कम्पनीमा जागिरे छिन् । प्रेरणा युथ क्लब गठन गरेर वर्गीय हित र सामाजिक सुधारका काम थालेका छन् उनीहरूले । सामाजिक परिवर्तनका लागि राजनीतिक शक्ति आवश्यक ठानेर केही युवक-युवती त्यतातिर पनि लागेका छन् । युथ क्लबकी अध्यक्ष एकता भन्छिन्, "राजनीति रुचिको विषय होइन । तर, त्यसबिनाको लडाइँ अधुरो भएकाले राजनीतिमा पनि सक्रिय हुँदै छु ।"
समुदायमा भइरहेको परिवर्तन नियाल्दै आएकी एकता भन्छिन्, "सबैका कोठामा टेलिभिजन छन् । पहिले दिदीबहिनीले कमाएर खुवाउँथे, अहिले दाजुभाइले कमाउँछन् ।" जिल्ला बाल कल्याण समितिका बाल अधिकार अधिकृत महेश नेपाली थप्छन्, "आफ्ना छोरीबुहारीलाई यौन व्यवसायमा धकेल्ने प्रवृत्ति अन्त्य भएको छ । त्यो पनि ठूलो उपलब्धि हो ।"
महिला तथा बालबालिका कार्यालय, बाँकेले वादी समुदायका २ सय २२ जना महिलालाई आयआर्जनका लागि ३३ लाख ३० हजार रुपियाँ अर्थिक सहयोग गरेको छ । विभिन्न समस्याको समाधानका लागि चालू कोषमा राख्ने गरी ७७ हजार रुपियाँ दिएको छ । कुटिर उद्योग सञ्चालन गर्न २ लाख ७७ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ । घरबासका लागि १७ परिवारलाई १ लाख ६५ हजार रुपियाँ दिएको छ । सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोगले शैक्षिक परिवर्तन ल्याउन सघाएको हो । महिला विकास अधिकृत प्रभा श्रेष्ठ भन्छिन्, "उनीहरू पुरानो फिरन्ते जीवनबाट मुक्त भएका छन् ।"
हिमाली जिल्ला बझाङ सदरमुकाम चैनपुरमा बस्दै आएको वादी समुदाय मौलिकता नै मासिन थालेकामा निकै चिन्तित छ । सेती नदी र बाहुलीगाढले अँगालो मारेको चैनपुरमा एक दर्जनभन्दा बढी घरपरिवार छन् । उनीहरूसँग पनि जग्गा-जमिन छैन । न पकाउने ठाउँ छ, न त सुत्न मिल्ने कोठा । त्यसमाथि वरपर फोहर पनि अति छ । बझाङमा अहिले पनि चेलीबेटीको कमाइ खाने चलन हराएको छैन ।
नेपालगन्ज बजारभित्र मात्र सुधार देखिए पनि बर्दियाको राजापुरमा बस्दै आएको वादी समुदायको अवस्थामा खासै परिवर्तन देखिँदैन । रोजगारी र अन्य अवसरबाट वञ्चित भएपछि उत्पन्न बाध्यताले पुरानै मार्गतिर धकेलेको बताउँछिन्, राजापुर-६ की एक वादी युवती । बर्दियामा उक्त समुदायका करिब साढे दुई सय घरपरिवार छन् । तीमध्ये राजापुरमै मात्र वादी समुदायका दुई दर्जनभन्दा बढी परिवार कष्टकर अवस्थामा छन् ।